tikniyoolajiyadda - Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd.
Adeegso qoraal (guji si aad waxbadan u aqriso)
1.Hubi iska caabinta walxaha kuleylka kuleyliyaha ee silikoon isla dufcad isku mid ah ka hor intaadan furin baakada, dhig iska caabinta ugu dhow isla wajiga, taas oo ka dhigeysa heerkulka foornada mid isku mid ah, iska caabinta aan ku qori doono aagga qabow.
Sababtoo ah carbide silicon waa shey adag oo jajaban, ha isku dayin inaad hagaajiso markaad rakibayso, ka dhig mid la dhaqaajin karo sida ugu macquulsan, macnaheedu waa inuu ka dhigayo mid dhaqaaqa oo si fudud uga bixi kara ka dib markaad rakibto. Qalabka kuleyliyaha carbide-ka wuxuu ku rakibi karaa dangle ama flat.
3. Qalabka korontada kuleyliyaha ee silikoonku wuxuu adeegsadaa xakamaynta thyristor, sidaa darteed awooda waa la hagaajin karaa, awooda lagu qiimeeyay koontaroolaha waa inay ka sarreysaa 2-3 jeer marka loo eego markaa qiimeynta foornada, sidaasna ku dheereyneysa walxaha kuleylka kuleylka ee silsiladda, isticmaalkiisa si ka fiican.
4.Choose habka fiilooyinka macquulka ah waxay kuxiranyihiin cabirka iyo iska caabinta walxaha kuleyliyaha carbide silicon.
5.Qeybinta kuleyliyaha carbide-ka cusub waa inay si tartiib tartiib ah u kordhisaa awoodda kuleylka, ka dhig farqiga u dhexeeya silsiladda carbide kululeynta heerkulka iyo heerkulka foornada waa ugu yar tahay, taas oo sii dheereyneysa walxaha kuleylka carbide-ka. gudbinta awoodda qaabkan soo socda: Marka hore u dhig awoodda 30% -40% awoodda naqshadeynta ah si ay u kululeeyaan 20 daqiiqo -40 daqiiqadood, ka dibna u kordhiyeen illaa 60% -70% awoodda naqshadeynta ee kuleylka 20 daqiiqo -30 daqiiqo, ka dib heerkulka walxaha kuleyliyaha carbide iyo foornada ayaa isku dheelitiran, ka dibna si tartiib tartiib ah u kordhi korantada, korantada la duubay iyo tan ilaa heerkulku ka gaaro heerkulka la doonayo, tani waa tan caadiga ah iyadoo la adeegsanayo danab iyo xilligan silsiladda kuleylka ee silsiladda silsiladda ah, waxaa loo dejin karaa xakamaynta heerkulka otomaatiga ah, markii iska caabbintu noqotay mid aad u kordhisa danab ku habboon, si loo sameeyo walxaha kuleylka ee silikoon n awood deggan
6. Ka dib marka foornada ay diyaar garowdo, marka qalabka kuleylka ee kuleylka ah ee kuleyliyaha noo dhigaya miiska sida soo socota: Marka awoodda gudbinta loo qoondeeyo inay bilawdo isticmaalka 40% awoodda awoodda caadiga ah, kululee 20 daqiiqo, ka dibna kordhi heerkulka heerkulka la doonayo 10 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo, ka dibna deji waqtiga lagu haysto.
7.Do kaliya ha hubin koronto ama koronto xilligan la isticmaalayo walxaha kuleylka ee silikoon carbide, maxaa yeelay markaad isticmaaleyso iska caabbintu si tartiib tartiib ah ayey u weynaan doontaa (danabku wuu sii weynaan doonaa kan hadda socdana wuu yaraan doonaa), marka awoodda soo galintu ay joogto tahay, markaa heerkulku waa joogto.
8.Haddii curiyaha kuleyliyaha carbide uu waxyeello soo gaaro bilooyin kadib, ha u beddelin mid cusub, beddel qalabka kuleylka ee silsiladda la isticmaalay, taasi waa sababta oo ah iska caabintu wey sii weynaan doontaa markii la istcimaalay, caabbinta kan cusub ayaa aad u yar, haddii aad isticmaasho midka cusub heer kulku wuu ka duwanaan doonaa qalabka kuleylka ee silikoon carbide loo isticmaalo, markaa waad beddeli kartaa midka la isticmaalay, taas ayaa ka dhigaysa iska caabinta aaladaha kululaynta. haddii aadan haysan kululaynta la isticmaalay cunsurrada, fadlan u beddelo dhammaan waxyaabaha kululeynta kuwa cusub, ka dibna midka la isticmaalay waad beddeli kartaa markii aad u baahato.
9. Caabintu way sii weynaan doontaa marka la isticmaalayo curiyaha kululaynta, haddii heerkulku aanu ku qanci karin marka danabku gaadho meesha ugu sarraysa, fadlan beddel isku xidhka, sida isku xidhka taxanaha ah wuxuu isu beddeli karaa isku midka, xiddigga isku xidhka u beddelidda xiriirka Delta, adiga waa inuu bedelaa isku xirnaanta waxay kuxirantahay xakamayntaada.
10. Birta ogsaydhka iyo buluugga iyo waxyaalaha kale ee foornada ku jira waa in lagu sifeeyaa waqtiga, ha ku kaydin foornada, haddii ay isku xidhaan curiyaha kululaynta si ay u waxyeeleeyaan.
11.Siidaada joogtada ah waxay yeelan doontaa cimri dheereyn isticmaal go'an.
12.Waxa aad rabto in laguu kululeeyo waa inaysan laheyn qoyaan aad u sareeya, si looga hortago walxaha kuleylka gubanaya, isku day inaad ka fogaato xiriir toos ah walxaha alkaline ka.
13.Kulka heerkulka kuleylka ee walxaha kuleyliyaha waa inuusan ka badnaan 1550 ℃.
Dahaarka (guji si aad wax dheeraad ah uga akhrisato)
SICTECH Silicon carbide aluminiumka kuleylka waa nooc ka mid ah filimka synthetic, kaas oo daboolaya dusha aagga kulul ka dib soo saarida walxaha kuleylka ee silikoon, wuxuu dheereyn karaa nolosha walxaha kuleylka kuleylka ee silsiladda gaar ahaaneed iyadoo la adeegsanayo, Waa laga sooci karaa gaaska si loo dedejiyo gabowga curiyaha kululeynta carbide, si loo ilaaliyo curiyaha kululeynta carbide, wixii faahfaahin dheeri ah ee dahaarka fadlan eeg hordhaca soo socda:
1. Dahaarka T: daahan wuxuu u adeegsanayaa sicirka qiiqa hoose ee isticmaalka caadiga ah, ka dhig sheybaarka kuleylka kuleyliyaha ah inuu kordhiyo nolosha shaqada ee 30-60%.
2. D daahan: daahan ayaa loo isticmaalaa kiiska nitrogen
3. Dahaarka S: daahan wuxuu u adeegsanayaa saddex ulood oo wajiyo ah (W nooc silikoon carbide ah oo kululeeya) galaas sabeynaya
4. Dahaarka Q: daahan wuxuu u adeegsanayaa kiiska uumiga ama hydrogen-ka
Jawi Saamaynta Ka-hortagga Jaakad lagu taliyay
Uumiga Cimilada kululeeyaha mararka qaarkood waxaa loo jaraa in ka yar shan meelood meel cimriga la filayo xaaladaha hawo furan ee qallalan. Waa muhiim in la kiciyo heerkulka ka dib marka la nadiifiyo qoyaanka si ku filan heerkul hoose marka la bilaabayo foornada cusub ama la bilaabayo in la isticmaalo mid ka dib hakin dheer. Q jaakad
Gaaska hydrogen iska caabbintu si dhakhso leh ayey u korodhaa xooggeeda farsamo ahaana si dhakhso leh ayey u xumaataa haddii heerkulku ka sarreeyo 1350 ° C jawiga gaaska hydrogen. Nolosha adeegga, si kastaba ha noqotee, waxay aad ugu tiirsan tahay xoogga qoyaanka gaaska. Waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo heerkul ka yar 1300 ° C qolka foornada. Waxaa lagu talinayaa in culeyska dusha sare la dhimo inta ugu macquulsan. (5W / cm2)
Gaaska nitrogen Gaaska Nitrogen wuxuu ku falceliyaa carbide silicon, wuxuu sameeyaa silikoon nitride marka heerkulku dhaafo 1400 ° C, tanina waxay gaabinaysaa nolosha adeegga. Marka loo eego qoyaanka, waxay la mid tahay tan ku saabsan kiiska haydrojiin. Waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo heerkul ka yar 1300 ° C qolka foornada. Waxaa lagu talinayaa in culeyska dusha sare la dhimo inta ugu macquulsan. (5W / cm2)。 D jaakad
Gaas gaaska loo beddelay (H275%) 、 (N225%) Tani waxay la mid tahay kiisaska gaaska hydrogen iyo gaaska nitrogen. Waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo heerkul ka yar 1300 ° C qolka foornada. Waxaa lagugula talinayaa in culeyska dusha sare la dhimo inta ugu macquulsan. D jaakad
Gaaska falcelinta burburka (N2 、 CO 、 CO2 、 H2 、 CH2etc.) Burburka hydrocarbon wuxuu ku dheggan yahay dusha sare ee kululeeyaha walxaha wuxuuna sababi karaa wareegga gaaban ee jawiga oo ay ku jirto hydrocarbon. Waa lagama maarmaan in la gubo kaarboonka iyadoo marmar hawada la galiyo foornada. Foornada korontada ku shaqeysa waa in loo qaabeeyaa kala fogaansho balaaran oo udhaxeeya walxaha kululeynta EREMA si looga hortago wareegga gaaban. D jaakad
Gaas baaruud (S 、 SO2) Dusha sare ee walxaha kuleyliyaha ayaa waxyeelloobi doona oo caabbintu si dhakhso leh ayey u kordheysaa haddii heerkulka EREMA uu ka bato 1300 ° C. Adeegso walxaha kuleylka ka yar 1300 ° C. D jaakad
Qaar kale Waxyaabaha kala duwan, ee laga soo saaro walxaha la farsameeyay inta lagu gudajiray kalinta, oo ay kujiraan halista sida leedhka, antimony, alkali iyo dhulka alkaline, iyo sidoo kale oksaydhka, iskudarka kiimikada ayaa mararka qaarkood ku dhagan kara walxaha kuleylka iyo iyaga oo kharibaya. Waxaa muhiim ah in horay looga soo saaro waxyaalaha la warshadeeyay ama laga sii daayo iyadoo la rakibayo dekedda qiiqa. Jaakad
Guryaha korantada, guryaha kiimikada ah (guji si aad wax dheeraad ah uga akhrisato)
SICTECH Qalabka kululeeyaha ee Silicon carbide guud ahaan waxaa lagu qaadaa qun-qunyar tartiib tartiib ah, sameynta Silica iyo kororka iska caabinta korantada, taas oo loogu yeero xumaanta inta la isticmaalayo. Falcelinta qiijinta qalliinka waxaa lagu muujiyey qaaciddada soo socota.
Carbide Silicon (SiC) wuxuu la falgalaa oksijiinka (O2) ee jawiga iyo dusha sare ee aaladaha kululaynta tartiib tartiib ah oo oksaydh ah, samaynta Silica (SiO2), oo ah insulato, halka qaddarkiisu kordhayo. Tani waxay kor u qaadaysaa iska caabinta korantada. Oxidation-ka wuxuu dhacaa marka heerkulku gaaro 800 ° C waana la dedejiyaa marka heer kulka uu kordho. Qiiqa degdegga ah wuxuu ku dhici doonaa marxaladda hore ee isticmaalka, laakiin qaddarka oksaydhku si tartiib tartiib ah ayuu u yaraan doonaa. xadka nolosha adeegga waxaa lagu taliyay inuu noqdo marka iska caabintiisa ay kordho ilaa 3 jeer iska caabinta bilowga ah. (Nolosha LD iyo LS waxay socotaa illaa iska caabintu ay gaarto 2 jeer qiimaha asalka ah). Sababta ayaa ah, in la gaaro qiyaas seddex jibbaar ah, kala duwanaanshaha cawduhu wuxuu noqdaa mid sii ballaaranaya oo kuleylka qayb walboo ka mid ah ayaa ka sii daraya, taasoo keeneysa qaybinta heerkulka aan fiicnayn ee qolka foornada. Sidoo kale, walxaha kuleyliyaha carbide silicon, markay imaanayaan dhammaadka nolosha, sababi maahan oo keliya iska caabinta laakiin isbeddelada kudhaca jilicsanaanta iyo burburka jabka xoogiisa oo sii xumaada, sidaas darteed taxaddar waa in la sameeyaa.